अगस्टमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
किता नो क्यानरी पार्क प्राथमिक विद्यालय पुरस्कार २०१२ जापानी फिल्म, Kita No Kanaria-tachi (उत्तरका क्यानरीहरू), रेबुन टापु, होक्काइडो = शटरस्टकबाट सेट गरिएको छैन
अगस्ट होक्काइडोमा भ्रमणका लागि उत्तम मौसम हो भनिन्छ। यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मिंगको कारण जापानमा आक्रमण गर्ने आँधी बढ्दै गएको छ र होक्काइडोमा पनि आँधीबेहरीको क्षति सजिलै देखिन सक्ने भएको छ जुन अहिलेसम्म आँधीको प्रभाव नभएको बताइएको छ। यद्यपि होक्काइडो मूल रूपमा अगस्तमा सहज छन्, कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमानको बारेमा सचेत रहनुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा होक्काइडो मौसम वर्णन गर्दछु। अगस्तमा मौसमको कल्पना गर्न सजिलो बनाउनको लागि, म तल अगस्टमा लिइएको फोटोहरू समावेश गर्दछु। कृपया जब तपाइँ तपाइँको यात्रा योजनाको योजना बनाउँनुहुन्छ सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तल अगस्तमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
अगस्त र होक्काइडो बारे प्रश्न र उत्तर
अगस्टमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
अगस्टको सुरूमा होक्काइडो मौसम
अगस्टको बीचमा होक्काइडो मौसम
अगष्टको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के हिक्काइडोमा अगस्टमा हिउँ पर्दछ?
अगस्तमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन।
के फूलहरू अगस्तमा होक्काइडोमा फूलेका छन्?
होक्काइडोमा, फूलका फूलहरूमा विभिन्न फूलहरू फूल्छन् र ती धेरै रंगीन हुन्छन्। अगस्तको सुरुवात सम्म ल्याभेन्डर खिल्यो।
अगस्तमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ?
होक्काइडोमा पनि, यो अगस्तको दिनको समयमा तातो छ। तर बिहान र साँझ तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ।
अगस्टमा होक्काइडोमा हामीले कस्ता लुगा लगाउनु पर्छ?
यदि तपाईं अगस्तमा होक्काइडोको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया गर्मीको लुगा तयार पार्नुहोस्। बिहान र बेलुका यो चिसो भएको कारणले तपाईले ज्याकेट, कार्डिगन इत्यादि ल्याउनु पर्छ जापानमा ग्रीष्म clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
अगस्टमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: अगस्टमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, होक्काइडो अगस्टमा तातो छ। यद्यपि तापक्रम बिस्तारै अगस्तको मध्य पछि घट्नेछ।
अगस्टमा होक्काइडो सरकारी कार्यालयको दृश्य, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
अगस्त August, २०१:: शिकिसाई-नो-ओका, बिआइ, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकको रोलि hills पहाडहरूको रंगीन दृश्यहरू
शुरुवातकर्ताहरूले घोडा सवारी सुविधा "WILDMUSTANG'S" जोजान्की, सप्पोरो, होक्काइडोमा घोडा सवारीको आनन्द लिन सक्दछन्।
अगस्टमा पनि होक्काइडो टोकियो वा क्योटो जस्ता degrees 35 डिग्री भन्दा बढी हुँदैन। दिनको उच्चतम तापमान degrees० डिग्रीको पहिलो आधामा रहन्छ र हावा तुलनात्मक रूपमा सुक्खा हुन्छ, त्यसैले यो सहज छ। यदि तपाईं छायामा हुनुहुन्छ भने, तपाईं शान्त हुनुहुन्छ।
होक्काइडो बिहानी र रातको बर्षमा चिसो हुन्छ, तर अगस्टमा यो विरलै हुन्छ कि तापक्रम बिहान र साँझ १० डिग्रीभन्दा तल जान्छ।
दर्शनीय स्थलहरूमा सुन्दर फूलहरू फूलेका छन्। तपाईं घोड सवारी र धेरै आरामदायक वातावरणमा क्यानोइ as जस्ता गतिविधिहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
होक्काइडो भ्रमणका लागि अगस्ट एक उत्तम मौसम हो। हरेक वर्ष, धेरै पर्यटक होक्काइडो आउँछन् देश र विदेशबाट।
यद्यपि, भर्खरै, टाइफूनको प्रभाव होक्काइडोमा पनि ठूलो हुँदै गइरहेको छ।
जब टाइफनहरू प्रायः होक्काइडोमा आउँछन्, शक्तिहरू कमजोर हुन्छन् र प्रायः शीतोष्ण कम दबावमा परिवर्तन हुन्छन्। यद्यपि, भर्खरै टाइफुनहरू होक्काइडोमा कुनै पतन बिना आउँदैछन्। वा यसले भारी वर्षा हुन सक्छ। यस कारणले गर्दा, कहिलेकाँही प्लेन र रेल रोकिन्छ।
सायद म टाइफुन क्षतिको बारेमा बढी जोड दिइरहेको हुन सक्छ। यदि तपाईं वास्तवमा अगस्तमा होक्काइडो जानुहुन्छ भने, तपाईं राम्रो मौसम हुन सक्नुहुनेछ र रमाइलो यात्रामा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, म जोड दिन हिम्मत गर्दछु। जब तपाईं जापानको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ, कृपया मौसम पूर्वानुमान जाँच गर्नुहोस्। जब तपाईं होक्काइडोमा बसिरहनु भएको छ, कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले जारी गरेको होक्काइडोको अगस्टको मौसम डेटा निम्न छ। कृपया यसलाई सन्दर्भ दिनुहोस् र तपाईंको यात्राको लागि तयारी गर्नुहोस्। म तपाईंलाई सुखद यात्रा चाहन्छु!
होक्काइडोमा मौसम डेटा (अगस्टको सुरूमा)
ओटारु २.26.0..19.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.37.2..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.27.3..17.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.44.3..XNUMX मिमी (-)
Biei २.26.8..15.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.44.2..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.27.6..17.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.50.3..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.22.3..17.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.2..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.24.0..16.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.30.3..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.24.0..15.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.3..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.21.2..14.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.26.6..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.21.3..15.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.4..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.26.3..16.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.3..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.26.1..19.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.46.2..XNUMX मिमी (-)
अगस्त १०, २०१:: कमुईवाक्का जलप्रवाहको प्राकृतिक तातो पानीले न्यानो पानीले आगन्तुकहरुलाई पानीको बाटो हिंड्न आकर्षित गर्दछ, शिरेटोको, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
होक्काइडोमा जुलाई जुलाई देखि अगस्टको शुरुमा वर्षको तातो समय हो। बिहान र साँझको कम तापमान प्राय: १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। तपाईं धेरै चिसो महसुस गर्नुहुन्न जबसम्म तपाईं पहाडी क्षेत्रहरूमा जानुहुन्न।
जे होस्, होक्काइडो टोकियो वा ओसाका भन्दा शीतल छ। यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं लामो बाहुला कार्डिगन र यस्तै अरू पनि ल्याउनुहोस्।
अगष्टको शुरुमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव 4: २ is हो, र सूर्यास्त समय १ 29::18२ हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करिब 4:११ र सूर्यास्त समय १ 11::18 को बारेमा छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (अगस्तको मध्य)
साप्पोरो २.26.5..19.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.30.8..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.25.9..18.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.30.2..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.26.5..17.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.8..XNUMX मिमी (-)
Biei २.26.2..15.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.4..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.26.8..16.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.8..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.22.6..17.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.3..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.23.4..16.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.3..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.23.3..15.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.32.5..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.20.7..14.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.5..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.21.3..15.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.41.1..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.25.1..16.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.44.9..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.25.8..18.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.41.3..XNUMX मिमी (-)
हरेक वर्ष अगस्टको मध्यमा, बोन फेस्टिवल नृत्य होप्प्याडोको सप्पोरोको ओडोरी पार्कमा आयोजित हुन्छ
अगष्टको मध्यमा, होक्काइडोका मानिसहरू आफ्ना परिवारसँगै अन्य जापानीजहरू जस्ता आफ्ना पुर्खाहरूको चिहान हेर्न भेला हुन्छन्। र ग्रीष्मकालीन पर्व बोन फेस्टिवल डान्स भनिन्छ विभिन्न ठाउँमा तपाईं उदाहरणको लागि ओडोरी पार्कमा बोन फेस्टिवल डान्समा भाग लिन सक्नुहुनेछ, सप्पोरोको केन्द्र।
यद्यपि होक्काइडोमा तपाई यस समय शरद ofतुका लक्षणहरू पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। दिनको अवधिमा अधिकतम तापक्रम थोरै कम हुन्छ। खासगरी हिमाली क्षेत्रहरूमा कूल दिनहरू बढ्छ।
अगस्तको मध्यमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव 4: 39 is हो, र सूर्यास्त समय १ 18::38 हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करिब 4:११ र सूर्यास्त समय १ 22::18 को बारेमा छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (अगस्टको अन्तमा)
साप्पोरो २.25.7..18.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.54.5..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.25.1..17.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.50.3..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.25.3..15.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.54.4..XNUMX मिमी (-)
Biei २.24.7..14.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.59.3..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.25.4..15.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.59.7..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.22.0..17.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.49.5..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.23.0..16.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.4..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.22.6..14.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.47.5..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.20.4..14.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.53.8..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.21.0..15.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.58.4..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.24.4..15.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.56.0..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.25.4..18.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.66.2..XNUMX मिमी (-)
अगस्त २,, २०१28,2018। कानेमोरी रेड ईंट वेयरहाउस र हाकोडाटे कारखाना, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
अगस्तको अन्तमा पनि, त्यहाँ दिनहरू छन् जब दिनको अधिकतम तापक्रम 30० डिग्री सेल्सियसको आसपास पुग्छ। पर्यटन क्षेत्रमा फूलहरूको क्षेत्रहरूमा, सुन्दर ग्रीष्म flowersतुका फूलहरूले तपाईंलाई स्वागत गर्न जारी राख्नेछन्।
यद्यपि डाईसेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा चिसो दिन बढ्छ। यदि तपाईं हिमाली क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कार्डिगन वा अन्य ज्याकेटका साथै छोटो बाहुला शर्ट पनि।
अगस्तको अन्तमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव ::4० हो, र सूर्यास्तको समय करिब १ is:२:50 हो।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :4::33। र सूर्यास्त समय १ 18:०06 को बारेमा छ।